Ukusikwa Nokushintshwa KweLaser ngeLebheli, Izinto Zokubambelela, Ifilimu Okudluliselwa kabusha okuboniswa kabusha - iWuhan Golden Laser Co, Ltd
Ukusikwa kwe-Laser Die nokuguqula i-Label, Izinto Zokubambelela, Ifilimu Lokudlulisa libonisa kabusha i-Retro
Ukusikwa Kwe-Laser Die Nokuguqula Imishini
IGALENSI LASER - UHLELO OLULULA LOKUGCINA NOKUQEDWA KWAMABHABULA
Mayelana neDijithali Yokuguqula Uhlelo
Ngokuthuthuka okusheshayo komphakathi kanye nokwehlukahlukana kanye nokuhlukaniswa kwezidingo zabantu zokuphila, kubuchwephesha ubuchwepheshe bedijithali futhi izindlela zokuphrinta bezishintsha njalo. Ukuphrinta kwedijithali sekuwumkhuba ongenakuphikiswa embonini, njengenani elikhulayo lamabhizinisi amafushane, amabhizinisi amancane abekiselwe ngokwezifiso, kanye nobungani bemvelo, nezidingo zokonga izindleko.
Ukuphrinta okwenziwe ngendlela eyenzelwe wena uqobo kudonsa amalebula amaningi futhi akhiqizwayo wokuphrinta amaphakheji ngenxa yejubane lawo elisheshayo, ikhwalithi ephezulu, ukukhiqizwa okukhaliphile nenqubo ye-automation.
Njengoba ukuphrinta kwedijithali kukhula, kanjalo ne-laser iyafa ukusika!
Umqondo wethu ukuhlinzeka amakhasimende ngenhla egcwele yezisombululo zokuphawula ilebula. Izisombululo zethu ezisezingeni elifanele, ezisezingeni eliphezulu le-laser die cut kanye nokuqeda zixazululwe zenzelwe ukufeza lokho okulindelwe nokuveza izidingo zebhizinisi, ngakho-ke unganikeza izixazululo zelebula elisha kumakhasimende akho.
Iziphi izinzuzo ze-laser die cut of amalebula?
Imishini yokusika i-laser ye-GOLDEN LASER ithokozelwa kakhulu ngabakhiqizi belebula njengoba bengakha izinhlobo eziningi zamalebula ngenqubo eyodwa, enejubane elikhulu, esebenza ngokuphelele.
Ukonga isikhathi. Akunasidingo sokwenza isikhunta, ukuqeda isikhunta esimnandi esenza isikhathi.
Izinto zokusika kanye nemidwebo zingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi. Ama-Laser atholakala ngobubanzi obuningi bokucushwa: ngomthombo owodwa noma we-laser owodwa.
Uhlelo lweGalvo luvumela ugongolo ukuba luhambe ngokushesha okukhulu, lubhekiswe ngokuphelele kuyo yonke indawo yokusebenza. Ukusika ngesivinini esikhulu ukwanelisa izidingo zamakhasimende ngesikhathi sangempela.
Umthombo we-laser we-CO2 RF wezinga lomhlaba. Ikhwalithi yokusika ihlala iphelele futhi ihlala njalo phezu kwesikhathi ngemali ephansi yesondlo.
Ukuze usike ngokunemba kanye nezingxenye ezenzelwe imininingwane. Le divayisi iqinisekisa ukunemba okuphezulu kakhulu noma isika amalebula ngegebe elingavunyelwe.
Imisebenzi ejwayelekile yeziteshi eziningi njengokuphrinta kwe-flexo, ukulila, ukuvuselela i-UV, ukushibilika, nokuphinda usebenze, njll.
Ilungele ukusebenza ngezinhlobonhlobo zezinto ezibonakalayo
Iphepha elicwebezelayo, iphepha le-matt, amakhadibhodi, i-polyester, polypropylene, ipulasitiki, ifilimu, njll.
Zilungele izinhlobo ezahlukahlukene zomsebenzi
I-Laser die ukusika noma yiluphi uhlobo lwesimo - ukusika okugcwele nokusika-ukusika (ukusika isigamu), ukugcoba, ukufaka umbhalo, ukumaka, ukufaka izinombolo, njll.
IGOLDEN LASER - Isingeniso Somshini We-Laser Die Cutting
I-GOLDEN LASER iyinkampani yokuqala eChina ukuletha bokusika i-laser embonini yokufaka nokufaka ilebula. Its Modular multi-esiteshini ngesivinini laser die-osezingeni umshini Ungashintshanisa uchungechunge yendabuko imishini olulodwa umsebenzi ezifana bendabuko umshini die-ukusika, wamnquma umshini, laminating umshini, ukuvenisha flexo ukuyiprinta umshini, umshini isibhakela futhi Rewinder.
Izixazululo zethu ze-laser die kanye zokuqeda zingafinyelela ngesikhathi esifanayo ukuphrinta kwe-flexo, ukulila, ukusika, ukusika isigamu, ukubhala, ukukhahlela, ukuqopha, ukufaka izinombolo nge-serial, ukushisa ngomshini nokushaya . Igcine izindleko zokutshala imali yamathuluzi amaningi, kanye nezindleko zabasebenzi nezokugcina zabakhiqizi bokuphrinta nabokufaka. Isetjentiswe kakhulu emalebula wokuphrinta, emabhokisini okufaka, amakhadi okubingelela, ompompi bezimboni nakwezinye izimboni.
Izici ze-GOLDEN LASER - Uhlelo lwe-QR Code Vision Recognition
Ukusika ngokuqhubekayo, komthungo lungisa imisebenzi ku-the-fly.
Ikhamera iskena ngokuzenzakalela ukuthola ikhodi ye-QR.
Ukuqeda imfucuza ebonakalayo.
Isikhathi sokusetha se-Zero siguqulwa, umlingani omuhle kakhulu weziprinta zedijithali.
Model Cha. I-LC350
Ububanzi beWebhu 350mm / 13.7 ”
Ububanzi beWebhu obukhulu 600mm / 23,6 ”
Ijubane leWebhu 0 ~ 80m / min (Ijubane liyahlukahluka njengemifanekiso ehlukene, izinsimbi, ubukhulu
Umthombo we-Laser CO2 evalekile
Amandla we-Laser 300W / 600W
Laser Ukusika Ukuqonda ± 0,1mm
Ukusikwa kobubanzi be-Laser 340mm
Ukunikezwa kwamandla kagesi I-380V 50Hz / 60Hz, Isigaba ezintathu
Model Cha. I-LC230
Ububanzi beWebhu 230mm / 9 ”
Ububanzi beWebhu obukhulu 400mm / 15.7 ”
Amandla we-Laser I-150W / 300W / 600W
Ukunqunywa kwe-Laser ngokunemba ± 0,1mm
Idizayini ejwayelekile, eguquguqukayo ngokwengeziwe yokuhlelwa okujwayelekile nokukhethwa kukho
Ukulungiswa okujwayelekile: Ukungaqondakali + kwe-web umhlahlandlela + i-laser kufa ukusika + ukususwa kwemfucumfucu + ukukhipha umoya owodwa
Izinketho eziningi: ukuphrinta kwedijithali / ucwecwe olubandayo / i-varnish / ukuphrinta kwesikrini / ukusika okucaba / ukusika okushisayo / ukugoqa ummese okufayo ukusika / ukugoqa kabili ...
Iphepha, amakhadibhodi, izinto ezibonisayo, i-3M tape yezimboni, i-PP, i-PET, i-polyimide, i-polymeric, izinto zepulasitiki nezamafilimu, njll.
Amalebula wokudla neziphuzo, amalebula wokuhlobisa, amalebula okusetshenziswa kwekhaya, amalebula womkhiqizo we-elekthronikhi, amalebula wokubonisa, amabhokisi wesipho, okokufaka okuphathelene nogesi, njll.
IZINYE ZAMABHODI SAMPLE
UMSEBENZI WONKE OWENZA KAHLE KAKHULU UKUZE WENZE IMishini!
Umkhakha Wezicelo Nokwabelana Ngendaba Yamakhasimende
Umkhakha wokuphrinta weDijithali
Ubuchwepheshe obukhula ngokushesha nangokomnotho ngokwengeziwe
Inkampani yakwa-E iyumkhiqizi wamalebula aphrintiwe iminyaka engaphezu kwengu-50 eCentral America. Ngokukhuphuka kwama-oda abhalwe ngamanani amancane.
Ekupheleni konyaka we-2014, inkampani yethula uhlelo lwedijithali lesizukulwane sesibili lokufa nokusika kwe-LC-350 kusuka kwa-GOLDEN LASER, ngemisebenzi ebusayo ne-varnishing yokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokwezifiso eziningi.
Njengamanje, inkampani isibe yisizinda esikhulu kunazo zonke sokukhiqiza amalebula aphrintiwe kanye nemikhiqizo yokufaka esifundeni, futhi ithole imiklomelo eminingi evela kuhulumeni wasekhaya, yaba yinkampani ekhiqiza amalebuli kakhulu yokuncintisana.
I-varnish enefomethi emincane + ye-laser die-cut-in-one-device
Inkampani ye-T ingumkhiqizi waseJalimane wamalebula wokuphrinta wedijithali onomlando omude. Inamazinga aqine kakhulu nezidingo zokuthengwa kwempahla. Ngaphambi kokuthi bazi i-GOLDEN LASER, zonke izimpahla zabo zathengwa eYurophu, futhi babelangazelela ukuthola umshini omncane we-UV varnish + laser die-cut-in-one-single umshini. Ngo-2016, ngokuya ngezidingo zenkampani iT, i-GOLDEN LASER yathuthukisa umshini wokusika umshini we-laser die LC-230. Ngokuqina nokuqina kwekhwalithi ephezulu yokusika, yaziswa kakhulu ngamakhasimende. Lapho nje ezinye izinkampani zelebuli zaseYurophu zithola lezi zindaba, zixhumane nabakwa-GOLDEN LASER futhi zathumela u-GOLDEN LASER ukuthi akhiqize izinqubo zokusika ilebula yelebula yedijithali kanye nezokuqedela ezihlangabezana nezidingo zazo ngazinye.
Inkampani M, umenzi ohola phambili womkhiqizi wamalebula ophrintiwe, uthenge imishini yokusika i-laser e-Italy eminyakeni eyishumi edlule. Kodwa-ke, imishini yase-Europe iyabiza futhi ibiza kakhulu ukuyigcina, bebelokhu bezama ukuthola uhlobo olufanayo lomshini wokusika i-laser die. KuLabelexpo 2015 eBrussels, amehlo abo aqaqeka lapho bebona umshini we-laser we-LC-350 usika usika ovela eGOLDEN LASER.
Ngemuva kokuhlolwa nokuphindwaphindwa kaningi, ekugcineni bakhetha umshini wokusika umshini we-laser die-GDEN-LAS-L3-350D ophindwe kabili-ngejubane eliphakeme ngokusebenza kangcono kwezindleko. Uhlelo luhamba ngesivinini kuze kufike ku-120 m / min, ngesiteshi esijikelezayo, izithangamu ezithola izigcawu nezinye izinhlelo ezengeziwe zokuthuthukisa inani elingeziwe lemikhiqizo yekhasimende.
Umkhakha wezesekeli wezingubo nezicathulo
Ukusika okubonakalayo kwe-laser ebonakalayo ebonakalayo
Inkampani ye-R yinkampani enkulu kunazo zonke yezicucu zezindwangu emhlabeni. Bangenise amasethi angaphezu kwe-10 we-GOLDEN LASER MARS chungechunge lwemishini yokusika i-axis laser eminyakeni eminingi edlule. Njengoba ama-oda enyuka, imishini yawo ekhona ayikwazi ukufeza izidingo zayo zokukhiqiza. I-GOLDEN LASER isungule uhlelo lokusika ukufa kwe-laser ukuze lwenziwe ngokwezifiso, olusetshenziselwa kakhulu ukusika izinto ezibonakalayo.
Amateyipu E-single / Double Side Adhesive
Izici ezijwayelekile zalolu hlobo lwamateyipu:
Ububanzi be-roll ejwayelekile buzoba ngama-350mm
Thickness ukusuka ku-0.05mm kuya ku-0.25mm
Ukusika okugcwele nokusika okuqinile kumateyipu we-roll